Ku xir AutoCAD Google Earth - Geofumadas
Nofeembar, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, tabo cusub
Rabitaanka guud ee isticmaalaha 'AutoCAD user' waa inuu ku xirnaado Google Earth, inuu awood u yeesho inuu ka shaqeeyo sawirka ay caruurtu ku ciyaaraan, in kasta oo saxnimadiisa ay su'aal ka taagan tahay, maalin kasta waxaan helnaa waxyaabo ka fiican oo waa waxtar halkii aan waxba lahayn. Maanta waxaan arki doonaa ugu yaraan laba beddelaad oo la sameeyo:
A. Iyadoo la raacayo talaabada wax soo saarka
Tani waa fulinta taas ciyaaraha sheybaarka, kaas oo laga bilaabo AutoCAD 2008 isku dhafan yahay. Tani waxay u baahan tahay oo keliya saddex tallaabo:
1. Qalaji cutubyada. Waa inay ahaadaan mitir, oo kaliya geliya taliska UNITS, oo ka dhigo isbedelka.
2. Kala saar saadaalinta. Tani waa inay ahaataa lat / lon oo ay la socotaa Datum WGS84. Si tan loo sameeyo waxaad sameysaa:
Khariidad> Qalabka> U xilsaar nidaamka isku-duwaha Caalamiga ah
Kadib waxaan doorannay Lat Longs, LL84, oo leh dhinaca galbeedka.
2. Soo qaado sawirka. Waxaan qornaa amarka ImportGEImage waana intaas. Nasiib darrose, waxay u jirtaa oo keliya AutoCAD Civil 3D / Khariidadda maadaama ay kaliya weydiisato barta dhexe waxay ku dhacdaa meeshii ay karto, waana inaad cabirtaa, dhaqaaqdaa, rogtaa. Dhibaatada kale waxay tahay inay ku timaaddo culeys keliya sida heshiiska uu yahay labada shirkadood. Si aad sawir ugu dirto xagga hoose, taabo soohdinta, dhagsii batoonka midig oo dooro “dalab soo bandhig> u dir gadaal"
B. Isticmaalida qalabka Plex.earth.
Qalabkani wuxuu ka yimid Plexscape, oo ay weheliyaan XANADU waxay soo bandhigayaan xalka xiisaha leh ee lagu mideynayo Google Earth iyo noocyada 2007, 2008, 2009 iyo AutoCAD 2010, labadaba Civil3D, Khariidadda, AutoCAD caadi ah (kani waa weyn yahay) iyo Dhismaha. Waxay leedahay iskaga mid ahaanshaha shaqooyinka taas wuxuu keenaa Microstation midaysan.
1. Ku rakib qalabka Plex.Earth. Waxaa jira ka soo qaad bogga laga bilaabo Plexscape, markaad rakibayso waxaad dooraneysaa nooca AutoCAD. Markii la hawl geliyo markii ugu horreysay, guddi ayaa la kiciyey si ay u diiwaangeliyaan nooca, waa inaad bixisaa cinwaan emayl oo aad u tagtaa koontada iyo xiriirka ay isla markiiba diraan. Muhiim maaha haddii loo rakibo noocyo kala duwan oo AutoCAD ah, waxaa la dhaqaajiyaa hal mar oo kaliya iyadoo PLEXEARTH amarkiisa menu-ka kor loo qaado, haddii aysan sidaas sameynin marka la furayo AutoCAD.
Waa in la fahamsan yahay in dwgu ay tahay in loo qoondeeyey qaybo qiyaaseed iyo mitir oo shaqo ah.
2. Waa maxay Plex.Earth. Waxa ugu fiican ee ku saabsan waa inaad ka shaqeyn karto UTM, adigoon u wareegin iskuduwaha juqraafi. Gobolka ayaa la xushay ka dibna soonaha sanduuqyada ku yaal dhanka bidix. Wax yar oo sigaar cabayaa ayaa indhahayga indhahaygu qabtaan marka ugu horreysa, ka dib faallo la bixiyay mid ka mid ah shaqadaydaWaxaan go aansaday inaan tijaabiyo waxaana aad ula dhacay wax ku oolnimadiisa. Hadda waxaan kuu sheegayaa waxa ay qabato:
La-cusbooneysii aragtida AutoCAD Google Earth. Tani waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaarka labaad, markaad doorato, weydiiso sanduuqa isla markaana isla markiiba u wareeji muuqaalka Google Earth ilaa aad ka soo gasho.
Ku calaamadee calaamadaha Google Earth. Tan waxaa lagu sameeyaa astaamaha saddexaad, markii la hawlgeliyo waxay u oggolaaneysaa in la dhigo dhibco laga abuuri doono Google Earth. Waa suurtagal in la sameeyo qodobbo BADAN oo loo qoondeeyo sharraxaad iyaga oo leh xulashada MAGACA. Tusaalaha, waxaan u adeegsanayaa khariidad horumar cusub ah, oo sawirka Google Earth weli ku yaal dhirta timirta Afrika.
Hel bartamaha bartamaha Google Earth. Had iyo jeer ku dhufo badhanka saddexaad, oo ku dheji point AutoCAD, oo leh bartii daaqada ee Google Earth soo bandhigay.
Soo-dejinta aragtida hadda ee Google Earth. Tani waxay la socotaa astaanta ugu horreysa, gudaha Soo-dejinta aragtida hadda, iyo waxa uu sameeyo waa tagaa Google Earth, nuqul a daabacan, soo qaado xadka oo sawir ahaan u soo qaad. Xiiso leh, oo ka fiican aaladda AutoCAD horeyba u keentay maxaa yeelay waxay ku timid midabbo, xallin fiican iyo sida ay u isticmaasho saddex dhibcood oo kontorool ah (ma ahan mid la mid ah AutoCAD) waxay u timaadaa sidii loo codsaday.
Ka saar sawirka masaajidka. Wixii ugu fiicnaa ee aan arko, waxaa laga sameeyaa astaantii ugu horreysay, iyada oo ikhtiyaar u ah "Abuur muusiga sawirada"Just ka codsaday in la qeexo degaanka, ka dibna sheegaye sida badan sanduuqyada humaag iyo guddi meesha aad dooran kartaa in image la soo bixi midabka ama cabbircawl, waxaad dooran kartaa doonaan in ay si toos ah u dejisan iyo shaqsi u taagan tahay, is illowsiin kartaa walaac la "ka bood".
Badhanka ugu dambeeya waa in lagu dhejiyo qaababka sida:
Muuqaal dheeraad ah oo muuqaal ah: tani waa mid aad u fiican mugdiga iyo watermark ee Google Earth in ay ka baxaan sanduuqa.
Wakhti intee in le'eg: ilaa iyo inta aad sugeysid qabashada, waa inaad ku kordhisaa mid ka mid ah kuwa soo socda horay loo soo saaray sida ku xiran nooca xidhiidhka aan heysano.
Sawirka muuqaalka: wuxuu noqon karaa jpg, png, bmp, gif iyo tif
Waddada sawirka: halka sawirada la soo duubay la keydin doono, waxaa jira fursado ay ku jiraan wadada isku mid ah sida dwg.
Nooca tijaabada ayaa si buuxda u shaqeynaya, 7 maalmood ama xaddidan 40 sawir. Foomamka ruqsad siinta waxay ka socdaan $ 23.80, iyadoo kuxiran waqtiga iyo tirada sawirrada, illaa lixda bilood ama liisanka hal sano ah; sidoo kale qoraalkan waxaad ka arki kartaa Maxaa Cusub ee 2.
Halkan waxaad ka soo qaadan kartaa Plex.Earth
Post Previous" Hore AutoCAD, sidee ayuu u shaqeynayaa FILEDIA?
Post Next … Bilkee…Next »
10 Jawaabo "Ku xir AutoCAD Google Earth"
Sergio Nieto isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u isticmaalnaa Maamulaha Dalxiiska ee AutoCAD, wuxuu si buuxda ula midoobayaa KML
Galab wanaagsan, miyaad iiga caawin kartaa inaan ogaado sida loo kordhiyo Plex Earth ee ku daro Autocad Map 3D 2014? Waad ku mahadsan tahay, mahadsanid
Lucas Sanchez isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayaan u soo dejin karaa sawirrada ka yimid dhulka google-ga ilaa 3D 2014?
Sababtaas ayaa ah sababta noocaaga ah ee 'AutoCAD' uu ka maqan yahay tilmaame jiirka. Waa la xalliyay, haddii aad aqoonsato waxa tilmaamaya waxa loogu yeero, ka dib waxaad aadaa Windows oo aad raadisaa astaamaha calaamadaynta, halkaasna waxaad ku magacawaysaa koobi ah tilmaame jira oo leh kii wax ku weydiinaya.
fernando ruiz siller isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan autocad sokeeye 3d 2008 oo aan soo dhoofsadaan images dhulka google ka, waxaan doonayaa in aan u isticmaalno iyo ma doonayo inuu ii sheeg tilmaamaha aan sax ahayn in this waa sababta oo ah, ka sokow waxaan haystaa google dhulka pro dillaac.
in aan samayn karo si aan u awoodo inaan soo dejiyo sawirro.
Google Earth wuxuu ku yaalaa WGS84
Taageeradu aad bay ugu fiicantahay sawirada, laakiin hal dib u dhac waxaan kahelay wareejinta sawirka (Google Earth) waxay ku jirtaa UTM PSAD56.
Waa maxay korantada ka caawin doonta wareejinta UTM WGS84 ... kiiskeyga
Dabcan haddii aad kaliya isticmaasho AutoCAD ...
Haddii aad isticmaasho Khariidadda AutoCAD 3d 2010 waxaad leedahay dhammaan awoodda Arc Gis iyadoo la adeegsanayo sida saxda ah ee ay AutoCAD bixiso ...
Waxkasta kuma dhaco khariidada autocad ee dabiiciga ah, waxaan doorbidaa ARC GIS ama ENVI GIS, ugu dambeyntii Mapinfo. Khariidadda autocad waxay wali u jihaysan tahay naqshadaynta iyo maaha inay isku xiraan laakiin weli waxay u baahan yihiin inay hagaajiyaan, waxna ma dhicin.